गीत गाउँदा किन सिचुएशन प्रति कम्सियस छन् त राजेश ? « News24 : Premium News Channel
गीत गाउँदा किन सिचुएशन प्रति कम्सियस छन् त राजेश ?
प्राय जसो गायक राजेश पायल राईले गीत गाउँदा शब्द र सिचुएसनमा बिचार पुर्याएर मात्र गीत गाउने बताउँछन् । एक साता पछि उनि युके, सिङ्गापुर, मलेसिया, हङ्कङग लगाएका मिनि वल्र्ड टुरमा प्रस्थान गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै महानायक राजेश हमालले जापान र अमेरीकामा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुने बताउँछन् ।
नेपाली गीत संगित क्षेत्रमा लामो समय बिताईसकेका गायक राजेश पायल राईलाई सदाबहार गायकको रुपमा चिनिन्छ । गायक राईले पुर्वेली गित, अधुनिक तथा फिल्मका हजारौ गीतहरु गाईसकेका छन् । अहिले फिल्का निर्माताहरुको प्रथम रोजाईमा उनि पर्दछन् । नाई नभन्नु ल फिल्मको सिक्वेल फिल्म नाई नभन्नु ल ४ मा पनि उनले दुई वटा गीतहरु गाएका छन् ।
राजेशले गाएका सबै गीतहरुमा उनको लागि दर्शन नमस्ते र नाई नभन्नु ल फिल्मको गीतहरु बिषेश रहेको पनि बताएका छन् । त्यस्तै दर्शन नमस्ते ३ गीती एल्बम पनि ल्यउदै गररेका बताएका छन् । गायक राईले पछिल्लो पुस्ताका गायन क्षेत्रमा आउन चाहने लाई स्वागत पनि गरेका छन् । यस क्षेत्रमा आउन चाहने सबैलाई हावा तालमा नआउन पनि आचग्रह गरेका छन् ।